Silicone Hose, Silicone Kuisa Strip, Silicone Gasket - Jujie
Jiangyin Jujie Rubber & Plastic Co, Ltd, yakavambwa muna 2007, ikambani ine hunyanzvi iri kushandisa mukugadzira nekusimudzira zvigadzirwa zvesilicone. Isu tinonyanya kugadzira mhando yepamusoro yesilicone hoses, silicone yekuisa micheka uye zvisimbiso zvemagetsi, zvemagetsi, magetsi, mishonga, chikafu, kemikari, mota, kuvaka ngarava, uye maindasitiri emuchina.
Yakatangwa Muna 2008
ZVIITIKO ZVEMAZUVA 11
ZVIMWE ZVINOGONESA ZVIITI
ZVAKADarika 20 Miriyoni
magetsi ekudhinda silicone girazi fiber slee ...
kupisa kupisa fiberglass sleeving
rakarukwa Washington City Offices silicone rabha Tubbe rubbe ...
fiberglass silicone rabha rakarukwa chubhu
waya Silicone faibha girazi kuputira Tubing
Kunogara yakakwirira tembiricha nemishonga kumativi fda d ...
Hot kutengesa eco-hushamwari Inoshandiswa pakuisa chisimbiso kana cu ...
2019 nyoro silicone rabha chubhu nemishonga silico ...
basa ukuru inoshanduka silicone furo chubhu t ...
multi-dzichipfekeka yakaderera mutengo rirambe riripo furo nesil ...
akasiyana chimiro silicone chipanji yakapupuma rabha s ...
Tsanangudzo yekushandiswa kwepombi
Kuchengeterwa kwepombi yepurasitiki Iyo yekuchengetera imba inofanirwa kuve inotonhorera, ine mweya uye yakaoma zvakakwana. Kupisa kwakanyanya kwakadzika pamusoro pe + 45 ° C pasina chero kuyerera kwemhepo kunogona kukonzera kusandudzika kusingaperi kwepombi yepurasitiki. Ndokumbira utarise kuti kunyangwe mune yakarongedzwa hose reel, iyi tembiricha inogona kusvikwa muzuva rakananga ....
Mutyairi wekare angashaiwa sei pombi yemotokari!
Kana iwe uchida kutyaira mushe, mota hose yakakosha! Kune akawanda mashandisirwo emota hosi mumotokari, uye rega ndikutaurire zvakadzama! Iwe unoziva kwazvo chiitiko ichi? Kune rimwe divi, kana kufamba kwemotokari ukasangana nemamiriro ezvinhu akaomarara emugwagwa, zvinowanzoomera kupfuura t ...